Nnọchi ịgba isi maka ARCORA kichin foset, leghaara nickel - arcorobinet
Welcome / ngwa / Foset ngwa / Nnọchi ịgba isi maka ARCORA kichin foset, leghaara nickel
Nke a na-esi na kichin kichin ọkpọkọ nnọchi isi nwere elu àgwà ABS aerator nwere ike mfe mfe site na mkpụrụ ego, n'ihi ya, ọ dịghị mmiri siri ike, na ọnụ ọgụgụ na-emekwa ka ọkọlọtọ nke iji mmiri na ndụ.
Uche a 2660002 dọpụtapụtara dị mma maka ọkpọkọ kichin na pịpụta mmiri. Dị Aquablade bụ ụdị ike dị ike n'ezie, nke nwere ike inye nri nsị nri n'ụzọ dị mfe, ọ bụkwa ụdị pụrụ iche n'ahịa. Mfe ịgbanwee n'etiti 3 ụdịdị
AKWA Ogo: teknụzụ ọkwa teknụzụ (ABS) gbakọtara, na-ahụ ogologo oge na ogo. Isi nke kichin sink foset ka nke ABS plastic na a leghaara nickel imecha, karịsịa ọla nchara nke yiri ọgaranya na jupụtara na ndụ
Dị mfe iji hichaa ma wụnye: ọkpọkọ mmiri na-agba mmiri bụ Neubler roba, mmiri na-abata nwayọ; a na-esi na silicone nozzles mee mpụta nke ịsa ahụ a na-asa ahụ, ọ dị mfe ihicha, naanị kpuchie isi ịsa ahụ gị ma dochie ya na nke ọhụrụ gị ka ị gbanwee kichin gị
2 afọ akwụkwọ ikike: Mmụọ nke foset sprayer gụnyere a afọ abụọ akwụkwọ ikike. Isi ịgba a enweghị ụdị ndabara, ọ ga-abụ ihe nlereanya ị ga-eji gbanyụọ ọkpọkọ mmiri n'oge ikpeazụ.
ARCORA Black nkwụghachi nkwụnye nkwụnye
ARCORA akwụkwọ mposi njide na shelf maka ...